आज २०७७ जेठ ७ गते बुधबारको राशिफल - Lekbesi Khabar
आज २०७७ जेठ ७ गते बुधबारको राशिफल
आज २०७७ जेठ ७ गते बुधबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
७ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०६:४७ May 20, 2020
भारतमा कोरोनाबाट एकैदिन १४६ जनाको मृत्यु: मृतक संख्या ३३ सय नाघ्यो